Icandelo lezokhenketho kufuneka libhengezwe livulekile nguRhulumente waseNepal
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeNepal Breaking » Icandelo lezokhenketho kufuneka libhengezwe livulekile nguRhulumente waseNepal
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeNepal Breaking • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • I-WTN
Ityala: Imeyile yoKhenketho
Oosomashishini boKhenketho eNepal bahlangana ukuze baququzelele isenzo sikaRhulumente:
INepal ivaliwe ngowona shishino lwayo olunengeniso ngenxa ye-COVID-19
Intlanganiso yabaphathi abaphambili bezokhenketho, ehlelwe yi-CEO ye-Nepal yeBhodi yezoKhenketho, u-Deepak Raj Joshi uzimisele ukubongoza urhulumente ukuba asuse iimfuno zokuvalelwa kwabahambi abagonyelweyo ukukhuthaza ukhenketho eNepal.
Ebonisa ukuba abasebenzi bezokhenketho abaphambili ngoku bagonyiwe ngamaqela ukuba icandelo lezokhenketho kufuneka livakaliswe livulekile nguRhulumente waseNepal.
Ukongeza eli qela licinezela ukuba ziphinde ziqale ii-visa ekufikeni nasekukhuthazeni uvavanyo lwe-PCR kwisikhululo seenqwelomoya
Ngelixa amacandelo eNepal kutshanje oicinywe phantsi kwemida ethile, ezinje ngeeholo zemiboniso bhanyabhanya kunye neeresityu ezingama-50%, kodwa akubangakho hlaziyo kuthintelo lohambo lwaseNepal kwiinyanga ezintandathu.
Unobhala wePATA uSuman Pandey ujoyine uluvo lokuba xa kufika ii-visa kufuneka zikhutshelwe abahambi abagonyiweyo kunye nemfuno yokuvalelwa yedwa isuswe. Urhulumente osandula ukusekwa akakagcwalisi izithuba ezininzi zenqanaba lekhabhinethi kwaye ubandakanyeke kwimicimbi yangaphakathi yezopolitiko namaqela ezopolitiko aphikisanayo ke oko kuhlala kubonakala ukuba urhulumente uyakwazi ukuthatha nawaphi na amanyathelo ukukhuthaza eli candelo libalulekileyo kuqoqosho lwaseNepal.
UDeepak Raj Joshi ukwangummeli weNepal kwi Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi, Kwaye wawongwa ngokujoyina iNkqubo ye-WTN yoKhenketho yamagorha.